Shahaadada iyo Tababbarka Warbaahinta Bulshada
In ka badan toban sano, waxaan ahaa isticmaale awood iyo danjire Agorapulse. Waad gujin kartaa maqaalka oo dhan, laakiin waxaan mar kale ku celinayaa inay tahay meesha ugu fudud ee maareynta warbaahinta bulshada ee suuqa ku jirta. Agorapulse waxaa lagu dhex daray Twitter, Facebook, Facebook Pages, Instagram, iyo xitaa Youtube.
Shirkaddu sidoo kale waa wax la yaab leh, sidoo kale, waxay si joogto ah u siisaa talooyin, istaraatiijiyado, iyo horumarin tan iyo aasaaskeedii. Kheyraadka kale ee cajiibka ah ee Agorapulse ay leeyihiin waa akadeemiyadooda halkaasoo ay kaa siinayaan koorso shahaado oo ay kujirto daabacaadda bulshada, maareynta warbaahinta bulshada, dhageysiga warbaahinta bulshada, iyo warbixinta warbaahinta bulshada.
Barashada Bulshada iyo Tababarida
Akadeemiyada Agorapulse ayaa ku habboon xirfadleyda suuqgeynta ee ku cusub baraha bulshada ama doonaya inay ku kabaan aqoontooda jirta koorso casri ah. Waxa ugufiican, akadeemiyadu waa Qaab-toobiye (taasi waa naanaysta koorsada) ee iskudareysa barxadda xeeladaha shirkaddaada ama shaqaalahaaga ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan.
Koorsadu waxay isku daraysaa fiidiyowyo leh hoggaamiyeyaasha warshadaha, casharka casharka, ka dibna kugula socodsiinaya adoo adeegsanaya taatikada ama istaraatiijiyada ka jirta barxadda Agorapulse. Waa kuwan cutubyada:
Qalabka Faafinta Bulshada - cutubkan waxaa ka mid ah daabacaadda hal ama in ka badan astaamo, jadwal iyo maamulid qoraallo jadwal ah, dhisidda kooxo daabicis caadiya, safka iyo maareynta qoraalada safka, soo gelinta waxyaabaha badan, shaqooyinka kooxda, kalandarrada la wadaago, dalbashada sumadaha warbixinta, iyo adeegsiga mobilka iyo fidinta chrome .
Maareynta Wadahadalka Bulshada - sanduuqa warbaahinta bulshada, ururinta faallooyinka xayeysiinta, qaadista ficillada miirayaasha, jawaabaha iyo dib u eegista, keydinta jawaabaha, calaamadeynta, calaamadeynta, qarinta, iyo u xilsaaridda jawaabaha, iyadoo la adeegsanayo kaaliyaha sanduuqa, iyo isticmaalayaasha muujinta.
Warbixinta Warbaahinta Bulshada - daawashada warbixinnada, dhoofinta warbixinnada, la shaqeynta sumadaha, iyo dhisidda warbixinnada korantada.
Dhageysiga Warbaahinta Bulshada - Dhageysiga shabakada warbaahinta bulshada (marka laga reebo Facebook iyo LinkedIn oo aan u oggolaan doonin), kormeerida iyo cusbooneysiinta dareenka, adigoo tilmaamaya astaantaada, tixraacyo aan rasmi ahayn, ama ereyga muhiimka ah, URL, iyo sidoo kale maareynta natiijooyinkaaga dhageysiga.
Mid kasta oo ka mid ah cutubyada ayaa ku dhammaanaya tijaabin tijaabo ah (taas oo aan saameyn ku yeelan imtixaankaaga shahaadada) laakiin waxay ku siinaysaa macluumaadka aad rabto inaad dib u qaadato. Waxa kale oo jira nashaadaadyo lagula taliyay inaad gasho koontadaada Agorapulse si aad uqaadato.
Imtixaankan shahaadiga ahi wuxuu tijaabinayaa aqoonta aad u leedahay waxyaabaha aasaasiga u ah marketing warbaahinta bulshada in kuwa ku takhasusay baraha bulshada ay ogaadaan. Ka gudubka imtixaankan iyo kasbashada shahaadadaada ayaa kuu oggolaan doonta inaad soo bandhigto xirfadahaaga iyo khibraddaada warbaahinta bulshada oo aad dhab ahaan xirfadle ugu noqoto Agorapulse.
Waxaan qaatay koorsada maanta iyo Anigu waxaan ahay (rasmi ahaan) khabiir Agorapulse ah!
Saxeex Hada U Noqo Akadeemiyada Agorapulse
Shaacinta: Waxaan ahay Danjire Agorapulse ah iyo gacan-wadaag.
Tags: shahaadoshahaadada warbaahinta bulshadafasalada warbaahinta bulshadakoorsada warbaahinta bulshadawaxbarashada warbaahinta bulshada
Oktoobar 25, 2011 at 5:46 AM
Wanaagsan in la ogaado!